Xanuunka ilmaha yaryar iyo kuwa waaweyn
Maxaa keena xanuunka ilmaha?
duritaanka sida xididka daawada laga qaato ama dhiigga l abaarayo, ama cirbad laga mudayo
xanuun fidinta murqaha ka imaan kara ama sariir jiifkeed ku raagidda waqti dheer
raaxo-la’aan isku-jirta muuqaalka jirka iyo shucuurta hoose ee qofka
Xanuunka waa la daaweyn karaa. Kooxda daryeelka caafimaadka waxay doonayaan in ay qabtaan wax walba oo ay awoodaan si xanuunku uga yaraado ilmaahaagana si wanaagsan u dareemo.
Sidee baynu u garannaa in ilmaha ama kuwa aan qaan-gaarin xanuun hayo?
Waxaa laga yaabaa in ilmahu uu inoo sheegi karo halka xanuunlka ka hayo iyo sida ay dareemayaan. Haddii aanay ilmahu inoo sheegi karin, ama aysan dooneyn inay inoo sheegaan, waxaynu eegi karnaa astaamo ku saabsan wax ay sameynayaan.
Waxaa kaloo aynu xanuunka ku cabbiri karnaa qalabyo khaas ah. Daryeelahu waxa uu eegi karaa sida illmahu wax u sameynayo ama astaamaha jirka (sida wadno qaraaca, heerka neefsashada, cadaadiska dhiigga) si uu u ogaado in ilmahu xanuun hayo, khaas ahaan ilmaha aadka u yar. Ilmaha yara weyn waxay awoodaan in ay xanuunkooda heerka uu yahay ka dhex arkaan sawirrada wejiyo kala duwan.
Ilmaha marka uu xanuunka hayo siyaabo kala duwan ayey u dhaqmaan. Eeg astaamaha hoos ku taxan.
Socod-baradka (1-3 jir) ayaa sheegi kara:
xanuunka oo ay muujiyaan
jirkooda oo ay adkeeyaan ama ay diidaan socod ama gurguurasho
cuntada iyo cabitaanka oo ay diidaan
iyagoo si fudud isugu buuqa
nasasho darro ama hurdo la’aan
Iskuulka ka hor (4-5 jir) ayaa sheegi kara:
xanuunka oo ay ka cawdaan
jirkooda oo ay adkeeyaan ama ay diidaan dhaqaaqid
diidmo in la taabta meesha xanuunaysa
nasasho darro ama caro badan
diidmo inay sheegaan xanuunka haddii ay xanuunka u arkaan ciqaab, ama ay ka baqaan daaweynta xanuunka
Diididda cuntada ama cabitaanka
Da’da iskuulka (6-12 sano) si toos ah ayay uga hadli karaan sbabta, nooca, iyo caddadka xanuunka. Astaamaha caamka ah waxaa ka mid ah:
iska jiifid ama ilaalin meesha xanuunaysa
weji madluun ah
welwel iyo iska fikirid
nasasho darro, rafasho
Ilmaha waaweyn (13-18 jir) waxaa lagu arkaa astaamo carruur iyo dad weyn oo isku jira. U fiirso:
is-beddel heerka firfircoonaanta
farxadda oo is beddesha
iskaashigooda oo yaraada
is-beddel habka cunidda ama hurdada
caro badan, nasasho darro
xanaaq ama la-noqosho
Marka ilmahu xanuun hayo, waxa ay waalidka leeyihiin qeyb muhiim ah. Sababtoo ah adiga ayaa cunuggaaga ugu aqoon badan, waxaad si hoose ula shaqeyn kartaa shaqaalaha si ay u caawiyaan si loo maareeyo xanuunka. Waalid ahaan ayaad muhiim u tahay ilmaha si aad u dejiso oo adigaa garanaya sida looga jawaabo xaaladaha cusub ama adag.
Si aad ilmaha ugu caawiso yareynta xanuunka, waxaad yeeli kartaa:
Inaad xaadir ahaato, ama aad weydiiso qof cunuggaaga si wanaagsan u yaqaan inuu soo booqdo. Joogiddaada ayaa badqabid iyo xakameyn u noqoneysa ilmaha.
Inaad siiso cunuggaaga xorriyad uu ku xusho waxii macquul kula ah.
Inaad ammaanto cunuggaaga, xitaa marka ay guushu yar tahay; ammaantu waxay dhalisaa kalsooni caawinaysa in cunuggaagu u adkeysto marxaladda.
Inaad isticmaasho wax kastoo niyad ahaan dejin kara cunuggaaga ka hor iyo ka dibba markii marxalad welwel keeni karta ay jirto. Guriga uga soo qaad alaab ilmuhu ku ciyaaro oo madadaalo u noqota.
Xanuunku waa mid saameeya jirka iyo niyaddaba. Ilmuhu waa ay dareemaan xanuunka jir ahaan, balse waa ay ka fikiraan niyad ahaan. Waxyaabaha ilmuhu dareemo waa gubasho, wax ku taagan ama majiirid. Waxyaabaha ay ku fikiraan waxaa ka mid ah “Maxuu xanuunkan ii hayaa,” “Muddo intee dhan ayuu I heyn doonaa,” “Muu qof iga qaado xanuunkan,” iyo “Sababta xanuunkan ma xumaan aan sameeyaa?” Waxay is weydiiyaan in xannunku ka sii dari doono iyo inay ka reysan doonaan weligood. Welwelkan ama walaacan waxuu ka dhegi karaa xanuunka mid sii dara, taasoo cunugga inuu sii welwelo keenaysa. Sidee loo joojin karaa meertadan “xanuun-welwel-xanuun”. Waxyaabaha caawiya si loo yareeyo welwelka iyo xanuunka waxaa ka mid ah:
U diyaarinta waxyaabaha xanuunka keeni kara (adigoo tixraacaya da’da iyo fahamka) taasoo ka hortagta xanuunka niyadeed iyo jir ahaaneedba, kordhisana fahamka iyo adkeysiga ilmaha.
Dhaqaajinta ilmaha adigoo haya ruxidda ama la socoshada waa ay caawin kartaa.
Siyaabaha dejinta sida xumbo afuufidda, ama si hoose u neefsashada waa ay yareyn kartaa walaaca.
Salaaxidda ama riixidda fudud waxay caawisaa jaha wareerinta dareemayaasha xanuunka u gudbiya maskaxda, taasoo keenta in maskaxdu aanay dareemin xanuun aad u badan.
Saaridda wax qandac ah ama qabow, meesha jugta ay gaartay waxay yareyn kartaa xanuunka ka imman kara bararka murqaha dhaawacmay.
Muuqaal ka fikiradda ama khiyaaliga waxuu caawin karaa in ilmahu degaan niyad ahaan oo ay u arkaan inay meel kale joogaan.
Kareemka kabaabyada, sida 4% lidocaine ayaa la saari karaa jirka si loogu kabuubyeeyo. Inta badan waxaa loo isticmaalaa duridda maqaarka ama xididka ka hor. Waa inay saarnaataa maqaarka si loogu kabuubyeeyo. Waa in ay saarnaato 30 daqiiqo si ay ugu shaqeyso. Xanuunka kama wada qaadeyso, laakiin waa ay ka yareyneysaa (Eeg waraaqda macluumaadka “Anesthetic cream” Kareemka kabuubyada).
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) waxay yareeyaan xanuunka iyo bararka. Waxaa la iibsan karaa iyadoo aanu dhakhtar kuu qorin, waxayna naaqusiyaan xanuunka yar ilaa kan dhexe. Si ay u yareeyaan xanuunka caloosha, waa in lala qaato cuntada markii ay macquul tahay. Ibuprofen (Motrin® ama Advil®) ayaa ka mid ah daawooyinka NSAID.
Opioids waa daawwoyin aad u awood leh oo loo isticmaalo daaweynta xanuunka dhexe ilaa kan saa’idka ah, inta badanna la isticmaalo qalliinka ka dib. Waxaa laga siin karaa xididka ama afka. Daawoyinkan waxay keeni karaan dhibaatooyin sida jir cun-cun, lallabo, ama saxarada oo adkaato ama yaraata. Daawoyinka waxay keeni karaan hurdo la’aan iyo neefsasho gaaban. Mararka qaarkood NSAIDs ama Tylenol iyo opioids ayaa iskun mar la wada isticmaalaa. Marka opioids-ka afka laga qaato, waa in cunto lala qaataa si looga taxadaro lallabada. Si iyadana looga taxadaro saxarada oo adkaata ama yaraata, waa in ilmahaagu cabbaa cabbitaan badan, ama faleebbo lagu duraa.
Isbitaalka gudihiisa, waxaa jira siyaabo kale oo loo qaato daawooyinka xanuunka. Ilmaha waxay isticmaali karaan tuubo daawo-xanuun oo xukumayo bukaanku Taasoo la riixayo batoon siinaya in go’an oo daawo xanuun ah. (Eeg warqadda barashada “Daawo-xanuunka uu xukumo bukaanku.”) Ilmaha la qalay waxaa la siin karaa tuubo yar oo la geliyo dhabarka u dhow dareemaha laf-dhabarta si daawada toos ay u gaarto dareemayaasha dhammaadkooda. (Eeg warqaddam macluumaadka ee Cirbadda xanuunka foosha ee laf-dhabarta hoose lagu mudo, “Epidural analgesia.”.)
Hubi inaad soo wacdo haddii ay daawadu aanay xanuunka yareyn ama xanuunku ka sii daro. Haddii aad u soo wacdo dhakhtarka xanuun waxaa lagu weydiin karaa haddii cunuggaaga qandho ay hayso, heerka xanuunku la’eg yahay, iyo nabarka ama meesha la qalay sida ay u eg tahay.
Hadii aad rabto faahfaahin ama qoraalo ku saabsan xanuunka ama caafimaadka kale, fadlan kala xiriir Maktabadda Xarunta Adeegyada Qoyska ama booqo barta internetka ee www.childrenshc.org